Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » 8 amin'ireo amerikana 10 manohana ny pasipaoro fanaovana vaksiny
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Zon'olombelona • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
81.8% ny Amerikanina no mankasitraka pasipaoro fanaovana vaksiny
Ny hevitra momba ny pasipaoro fanaovana vaksinina dia nitombo hatrany tamin'ny lazany.
Ny fanadihadiana dia nahitana olona 997 nanerana an'i Etazonia izay nanontaniana karazana fanontaniana mifandraika amin'ny pasipaoro vaksinina.
Baby Boomers no tsy dia manohana ny pasipaoro vaksinina.
50.9% ny valinteny valinteny nilaza fa mety hanao dia an-trano izy ireo miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny pasipaoro.
Ny valin'ny fanadihadiana vaksinina farany teo dia nampiharihary ny fahatsapan'ny Amerikanina ny fetran'ny fitsangatsanganana samihafa mifandraika amin'ny areti-mandringana COVID-19.
Miaraka amin'ny adihevitra mitohy momba ny fahalalahana manokana sy ny fahaizan'ny dia tsy misakana ny firenena rehetra, mino ny ankamaroany ankehitriny fa ilaina ny porofon'ny vaksiny.
81.8% an'ny Amerikanina nohadihadiana no manohana ny hevitra momba ny Passport Vaccine, miaraka amin'ny Baby Boomers no tsy dia manohana an'io hevitra io.
Ny fanadihadiana dia nanondro ihany koa hoe iza no taranaka mety tsy hanaiky izany pasipaoro fanaovana vaksinys sy ny fihetseham-pon'ny lehilahy sy ny vehivavy navalin'izy ireo momba ilay olana.
Ny hevitra momba ny pasipaoro fanaovana vaksinina dia nitombo hatrany tamin'ny lazany. amin'ny New York City ary ny ampahany amin'ny California Ankehitriny dia manome porofo ny amin'ny fanaovana vaksiny, miaraka amin'ireo orinasa lehibe toy ny sambo fitsangantsanganana norveziana, tsy azo ihodivirana ny tanàna hafa, fanjakana ary orinasa hanomboka hanao toy izany koa. Ary na dia noraran'ny fanjakana sasany toa an'i Florida sy Texas aza ny pasipaoro fanaovana vaksiny, dia manomboka zatra an'io ny sarambabem-bahoaka.
Natao teo anelanelan'ny 2 Jona3, ny fanadihadiana dia nahitana olona 997 nanerana an'i Etazonia izay nametraka fanontaniana isan-karazany mifandraika amin'izany pasipaoro vaksinina - nofaritana ho "antontan-taratasy manaporofo fa vita vaksinin'ny COVID-19 ianao." Raha nanontaniana ihany koa ny momba ny safidin'izy ireo mifandraika amin'ny fameperana ny dia amin'ny ankapobeny, ny olom-pirenena nanaovana fanadihadiana dia maneho sokajy demografika isan'izany ny lahy sy ny vavy (lahy / vavy), taranaka (Baby Boomers / Generation X / Millennial / Generation Z), ary ireo izay efa nanao vaksiny vs ireo mbola tsy vita volo.
Ny ankamaroan'ny mpamaly dia nahalala ilay teny pasipaoro vaksinina, miaraka amin'ny 82% milaza fa manohana ilay hevitra izy ireo amin'ny endrika iray na hafa. Ireo valiny ireo dia nifamatotra tamin'ny taona sy ny lahy sy ny vavy, ary ny vehivavy 7% dia mety hanohana ny pasipaoro vaksinin'ny lehilahy. Anisan'ireo tsy nasiana vaksiny, ny lehilahy dia toa voatosika hanao vaksiny miorina amin'ny fameperana ny dia lavitra noho ny vehivavy.